पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने एमालेको निर्णय : असोज ९ भित्र स्थानीय तहको अधिवेशन - Sunaulo Nepal
शनिवार, आश्विन ९ गते २०७८
पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने एमालेको निर्णय :...
श्रावण १७, २०७८ आइतवार १८:०१ बजे
काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर अगाडि लाने निर्णय गरेको छ । आइतबार ललितपुरको तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लानका निम्ति गर्नुपर्ने सबै प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले २०७५ जेठ २ को टाइम लाइनअनुसार नै पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लाने निर्णय भएको महासचिव ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले देशभरका सबै पालिकाको अधिवेशन असोज ९ भित्र गरिसक्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सोमबार दिउँसो ३ बजे पुनः बैठक बस्नेगरी आइतबारको बैठक सम्पन्न भएको हो । एमालेले साउन २४ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।
यसअघि शनिबार बसेको बैठक कुनै पनि विषयमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । प्रतिष्ठानमा नै बसेको बैठक पार्टी एकताका लागि थप पहल गर्ने भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । बैठकमा केन्द्रीय विभाग पूर्णता, विधान महाविधेशनको तयारी र पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरणका विषयमाथि छलफल राखिएको थियो ।
शनिबार नै अध्यक्ष ओली र पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको छलफलमा पार्टी एकताका लागि दृढतापूर्वक लाग्ने सहमति भएको थियो ।
सिंहदरबारमा भएको पार्टी आन्तरिक विवाद समस्या समाधान कार्यदलका नेता सहभागी छलफलमा कुनै पनि हालतमा पार्टी एकतालाई जोगाउन लाग्ने गरी छलफल भएको थियो ।
कार्यदलले गत २७ गते १० बुँदे सहमति गरेको थियो । निर्धारित समयभन्दा केही ढिला गेर सुरु बैठकमा नेपाल पक्षीय नेता सहभागी नभए पनि पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहभागी थिए।
दुवईमा वसन्त चौधरीलाई हृदयाघात, ओपन हार्ट सर्जरीको तयारी
वैशाखसम्म सबैलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसक्छौ : प्रधानमन्त्री देउवा
स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल बढेको छैन : अर्थ मन्त्रालय
शुक्रबारको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा के के भयो ?
यात्रा गर्नेहरूको एन्टीजेन परीक्षण अनिवार्य गर्न सरकारकाे निर्देशन
प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने बादलको चेतावनी !
महाधिवेशन सार्नेबारे गगन थापाकाे असन्तुष्टि : नेताले आदेश दिए पुग्ने, कार्यकर्ता कुरेर बस्नुपर्ने ?
थपिए १४ सय ७६ काेराेना संक्रमित, ९ जनाकाे मृत्यु
हामीलाई आर्थिक स्रोतभन्दा समयको महत्व छ : ऊर्जा मन्त्री भुसाल
एटीएमको शुल्क तोकियो, सस्तो भयो मोवाइल बैंकिङ कारोबार
आयातित मोटरसाइकलको कर बढाएकै हो : अर्थमन्त्री शर्मा
विधिमा कांग्रेस हाक्न अब म सभापति हुनुपर्छ : प्रकाशमान सिंह
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र अर्थमन्त्री शर्माबीच भेटवार्ता
बिहारको एक गाउँ, जहाँ नेपाली बस्छन्, तर छैन सडक र स्वास्थ्य सुविधा